भूपि मुक्तिकामी जनताका आदर्श कवि
डा. अमर गिरी
भूपि नेपाली काव्यफाँटका महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हुन् । आरम्भमा माक्र्सवादी दर्शनबाट डोरिएका उनी आधुनिक नेपाली कविताका दोस्रो प्रहरका प्रखर प्रतिभा थिए । केही समय उनी कम्युनिस्ट राजनीतिमा पनि सक्रिय रहेका थिए । वि.सं. १९९२ पुस १० गते मुस्ताङको थाक टुकुचेको सम्पन्न थकाली परिवारमा उनको जन्म भएको थियो । ०४६ साल जेठ १ गते उनको निधन भएको थियो । उनी साढे तीन दशकजति साहित्य सिर्जनामा सक्रिय रहे । तीसको दशकपछि सिर्जनशीलताका दृष्टिले उनी त्यति सक्रिय र उर्वर देखिन्नन् । उनका ‘परिवर्तन’ (नाटक २०१०), ‘नयाँ झ्याउरे’ (कविता सङ्ग्रह २०११), ‘निर्झर’ (कविता सङ्ग्रह २०१२), ‘घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे’ –कविता सङ्ग्रह २०२७) र ‘भूपि शेरचनका कविता’ (कविता सङग्रह, २०५७) गरी पाँच कृति प्रकाशित छन् । कविताका क्षेत्रमा भूपिलाई भूपि बनाउने मुख्य कृति ‘घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे’ हो । आधुनिक नेपाली गद्य कवितामा भूपि सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हुन् ।
बीसको दशकको अन्त्यसम्मका उनका कविता मूलतः प्रगतिशील चेतनाबाट डोरिएका छन् । त्यसपछिका उनका कवितामा उनका पूर्ववर्ती कवितामा पाइने विशेषता क्रमशः कमजोर बन्दै गएका छन् । उनमा निराशा, विसङ्गतिबोध र कुण्ठाको विकास हुन आरम्भ गरेको पाइन्छ । उनमा आएको यो परिवर्तन विचारधारात्मक परिवर्तनसँग जोडिएको छ । दुईवटा ‘क’ अर्थात् ‘कम्युनिस्ट’ र ‘कवि’ भएर बिग्रिएँ भन्ने उनको कथन यसैसँग सम्बन्धित छ । उनको लेखकीय जीवनको उत्तराद्र्ध लेखनका दृष्टिले त्यति महत्वपूर्ण हुन नसक्नुमा यसले पनि काम गरेको छ । ०१६ देखि ०२५ सालसम्मको अवधिमा लेखिएका उनका कविता सर्वाधिक शक्तिशाली छन् । यस अवधिका केही कवितालाई छाडिदिने हो भने उनका समग्र कवितामा प्रगतिशील चेतना पाइन्छ । यही चेतनाको सशक्त कलात्मक अभिव्यक्ति उनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विशेषता हो ।
भूपि नेपाली कवितामा विकसित आधुनिकतावादी धाराविरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै आफ्नो कविता लेखनलाई उचाइ प्रदान गरेका स्रष्टा हुन् । ०१६ सालपछि आधुनिक नेपाली कवितामा आधुनिकतावादी दृष्टिकोण र प्रवृत्तिको विकास भएको थियो । पश्चिममा आधुनिकतावादको जन्म प्रयोगपरक एवं अम्बागार्द प्रवृत्तिका रूपमा भएको पाइन्छ । आधुनिक नेपाली कवितामा पाइने प्रतीकवादी, अति यथार्थवादी, विसङ्गतिवादी, शून्यवादी आदि दृष्टिकोण र प्रवृत्तिहरू आधुनिकतावादका दृष्टान्त हुन् । यस्ता कवितामा अन्तर्वस्तुका रूपमा विसङ्गति, कुण्ठा, निराशा, अराजकता, विद्रोह, पलायन आदि आएका छन् भने प्रयोग, अमूर्तता, क्लिष्टता, जटिलता, अबोधगम्यता कविताका शिल्पगत विशेषता रहेका छन् । कवितामा आधुनिकतावादी स्वर र शैली बलियो हुँदै गरेका बेला भूपिले सरल, सरस, कलात्मक, सम्पे्रष्य र सामाजिक सरोकारका गम्भीर कविता रचना गरेर कवितालाई एक नयाँ रूप र दिशा प्रदान गरेका थिए । भूपि नेपाली कवितामा गोपालप्रसाद रिमालबाट आरम्भ भएको कविता परम्परालाई अघि बढाउने उल्लेखनीय व्यक्तित्व हुन् ।
भूपिको कविता लेखनका बारेमा आधुनिकतावादीहरूबाट तिखा टिप्पणी पनि भएका छन् । उनका कवितालाई नारा, प्रचारमुखी र कलाविहीन भनेर पनि आलोचना गरिएको छ । यो आलोचना सिर्जनाका क्षेत्रमा चल्ने वैचारिक सङ्घर्षकै एक अङ्ग थियो । यो कला, कलाको प्रयोजन र भूमिकालाई हेर्ने भिन्न दृष्टिकोणबीचको सङ्घर्ष थियो । आधुनिकतावादी प्रवृत्ति फस्टाउँदै र बलियो हुँदै गरेको समयमा भूपिले जसरी कवितालाई आफ्नो समयको यथार्थसँग जोडेर त्यसलाई प्रखर अभिव्यक्ति दिए, त्यो निकै महत्वपूर्ण रहेको छ । उनका कविताको सामथ्र्य पनि उनीमाथि प्रहारको एक प्रमुख कारण थियो । आफ्नो समयलाई भूपिले जति सशक्त अभिव्यक्ति उनका समकालीन अरू कसैले दिएका छैनन् । कवितामा आफ्नो समयको यथार्थको अङ्कनका दृष्टिले उनी श्रेष्ठ कवि हुन् । उनका कवितामा यथार्थको कलात्मक प्रतिबिम्बन आलोचनात्मक चेतनासहित भएको छ । भूपिले ‘कवि हुनु’ शीर्षक कवितामा कवि हुनुलाई परिभाषित गर्दै ‘कवि हुनु, अँध्यारो कोठामा प्रकाश ल्याउन बिजुलीका नाङ्गा तारहरूलाई छुनु हो’ भनेका छन् । उनले आफ्ना कवितामार्फत यही गरेका छन् । उनले साहसपूर्वक जसरी आफ्नो समयको कुरूप यथार्थको उद्घाटन गरेका छन्, त्यो बिजुलीका नाङ्गा तारलाई छोएसमान रहेको छ । कविमा रहेको उज्यालोको भोक यस साहसको मूल आधार रहेको पाइन्छ ।
भूपिले कविता पाठकबाट टाढिन र अलोकप्रिय बन्न आरम्भ गरेका वेला कवितालाई लोकप्रिय बनाए र यसको नैसर्गिक स्वभावलाई अझ सबल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका सम्पादन गरे । कविताको नैसर्गिक स्वभावले आममानिस, उनीहरूको संवेदना, व्यवहार, भाषा, अनुभव, स्वप्न, सङ्घर्ष आदिसँग कविताको गहिरो सम्बन्धलाई बुझाउँछ । कविता आफ्नो कठिन यात्रामा यही विशेषताका कारण लोकप्रिय रहँदै आएको छ । आफ्नो यात्राको प्रारम्भिक चरणमा मनुष्यको हृदयलाई स्पर्श गर्ने दृष्टिले कवितामा पाइने असाधारण क्षमता यसैसँग सम्बन्धित रहेको छ । आफ्नो नैसर्गिक स्वभावलाई गुमाउँदै कविता आममानिससँग टाढिँदै जानु र अमूर्त, क्लिष्ट र जटिल बन्नु कविता अलोकप्रिय बन्नुको एक महत्वपूर्ण कारण हो । आममानिससँग कविताको सम्बन्ध र संवादका सन्दर्भमा भूपि सधैँ गम्भीर रहेका पाइन्छन् । यो गम्भीरता एक कविका रूपमा उनको सफलताको महत्वपूर्ण आधार रहेको छ ।
भूपिले कवितालाई मनुष्यको मुक्तिधर्मी सङ्घर्षसँग जोडेर त्यसलाई शक्तिशाली एवं लोकप्रिय बनाएका थिए । भूपिले जसरी हिमाल पग्लँदा निर्मल खोलाको जन्म हुन्छ, त्यसरी नै कवि पग्लँदा कविताको जन्म हुन्छ भनेका छन् । भूपिको कथन कवितालाई सार्थक संवाद बनाउने कुरासँग सम्बन्धित छ । उनले कवि संवेदना र विचारका तहमा समाजसँग जोडिनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । कविको हृदयको पग्लाइ जीवन र जगत्का गम्भीर सरोकारसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ भन्ने उनको दृष्टिकोण थियो । उनी कवितालाई आममानिस, उनीहरूका स्वप्न र सङ्घर्षहरूसँग जोडेर मात्र शक्तिशाली संवादका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्थे । उनका कविताको लोकप्रियता यसको दृष्टान्त हो । उनका कविता आफ्नो समयसँग सशक्त संवादका नमुना हुन् । उनका कविताले हामीलाई कवितालाई एकालाप वा स्वगत कथन हुनबाट बचाउनुपर्छ मात्र भन्दैनन्, यसको भाषालाई धारिलो बनाउनुपर्छ पनि भन्छन् । कवितालाई आममानिसको भाषा बनाउन सक्दा नै यसलाई जीवित राख्न सकिन्छ भन्ने सन्देश भूपिका कविताले दिन्छन् । भूपिका कवितामा पाठकले गर्ने आत्मीयताको अनुभव भूपिका कवितामा पाइने सामूहिक आवेगसँग जोडिएको छ । पाठक उनका कवितामा आफूलाई पाउँछन्, नियाल्छन् र अघिल्तिर प्रस्थान गर्छन् । उनका कविताले कठिन बाटोमा हिँड्न उर्जा मात्र प्रदान गर्दैनन्, दृष्टि पनि प्रदान गर्छन् ।
भूपिको काव्य सामथ्र्यलाई अन्तर्वस्तु र रूपको सुन्दर एकतामा हेर्नुपर्छ । उनका कवितामा कविताको बाह्य र आन्तरिक पक्षको सुन्दर एकता पाइन्छ । उनले आफ्ना कवितामा युग–जीवनका प्रतिनिधि पक्षलाई मात्र उठाएनन्, त्यसको प्रभावकारी अभिव्यक्तिका निम्ति त्यस्तै भाषाशैली, बिम्ब, प्रतीक, अलङ्कारहरूको प्रयोग पनि गरे । लयात्मकता उनका कविताको एक महत्वपूर्ण विशेषता हो । भूपिको काव्यसामथ्र्यको मूल आधार विसङ्गति र विकृतिप्रति तिखो प्रहार, समानतामा आधारित न्यायपूर्ण समाजको स्थापनाको आकाङ्क्षा, प्रगतिशील मानवतावादी दृष्टिकोण, प्रगाढ राष्ट्रवाद र भविष्यप्रतिको आस्था हुन् । भूपिले आफ्नो समयका राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवनका कुरूप पक्षमाथि गहिरो एवं मार्मिक व्यङ्ग्य गरेका छन् । आफ्नो समयको कुरूप यथार्थमाथि यति चोटिलो प्रहार त्यसवेलाका अरू कुनै कविबाट भएको पाइन्न । भूपिका कवितामा गम्भीर इतिहास दृष्टि पनि पाइन्छ । उनी इतिहासप्रति आलोचनात्मक छन् । यसैअनुरूप कवितामा प्रस्तुत भएका छन् । उनका कवितामा उत्पीडित राष्ट्रहरूले उत्पीडक राष्ट्रहरूका विरुद्ध गरेको सङ्घर्षको समर्थन र त्यसप्रति ऐक्यबद्धता पनि पाइन्छ । उनी साम्राज्यवाद, उपनिवेशवादका विरोधी थिए ।
भूपिका कविता सत्यं शिवं र सुन्दरम्का निम्ति आफ्नो समयसँग गरिएका प्रभावकारी संवाद हुन् । वस्तुतः एउटा कवि आफ्नो समयसँगको शक्तिशाली संवादमा जिउँछ । भूपिका कविताले आफ्नो समयसँग सार्थक संवाद गरेका छन् । आफ्नो समयसँग सशक्त संवाद गर्ने उनका कविताको भाषाशैली, सरल, सरस, अनुप्रासमय र कलात्मक छ । बिम्ब र प्रतीकहरू नेपाली माटो र जीवनबाट टिपिएका छन् । अलङ्कारको सुन्दर रूपमा प्रयोग गरिएको छ । भाषाको दुरुपयोग र विषयवस्तुको पुनरावृत्तिको दोषबाट उनी बचेका छन् । उनका कविता सरल भईकन पनि कसरी उत्कृष्ट हुन सक्छन् भन्ने कुराका दृष्टान्त हुन् । उनका कवितामा सामञ्जस्यता, सन्तुलन, आवेग, गहिरो व्यञ्जनात्मकता, तनाव, लालित्य, सुस्पष्ट काव्यदृष्टि र गम्भीर सामाजिक सरोकारहरू पाइन्छन् । कविता उत्कृष्ट हुनका निम्ति यी सबै कुरा आवश्यक छन् । कविता व्यक्तिगत प्रतिक्रियाभन्दा माथि उठेर जीवनका विपुल अनुभूति, वैविध्यपूर्ण यथार्थ एवं तिनको सबल र सार्थक प्रकटीकरणमा बाँच्छ र त्यसले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा सम्पादन पनि गर्छ । उत्कृष्ट कविताको पहिचान आफ्नो समयको द्वन्द्वलाई कविले कसरी अभिव्यक्ति दिएको छ र कविता समकालीन हुँदाहुँदै पनि कसरी सार्वकालीन भएको छ भन्ने कुराबाट हुन्छ । समकालीन हुँदाहुँदै पनि भूपिका कविताले सार्वकालीन चरित्र ग्रहण गरेका छन् ।
भूपिको काव्य संवेदना नेपाली काव्यसाहित्यको ऊध्र्वगामी धाराबाट निर्मित छ र यो आफ्नो माटोसँग गहिरो गरी जोडिएको छ । भूपिको काव्य संवेदनाको चर्चा गर्दा प्रसिद्ध रुसी कवयित्री आख्मातोबाबारे अर्का प्रसिद्ध रूसी कवि ओसिप मान्देलस्तामले गरेको टिप्पणीको सम्झना हुन्छ । मान्देलस्तामले आख्मातोवाको काव्य संवेदनाका जराहरू उन्नाइसौँ शाताब्दीको यथार्थवादी रुसी साहित्यसँग जोडिएको उल्लेख गरेका छन् । यसको केन्द्रमा तोल्सतोय, गोगोल, चेखब र दोस्तोयवस्कीहरू थिए । भूपिको काव्यसंवेदनाको निर्माण नेपाली काव्य परम्परा, आफ्नो माटो, त्यसका सुख–दुःख, स्वप्न–सङ्घर्षहरूबाट भएकाले उनका कविताले आफ्नो समयलाई सजीव अभिव्यक्ति दिएका हुन् । संवेदनाको निर्माण कविको विश्वदृष्टिसँग जोडिन्छ । काव्यदृष्टि विश्वदृष्टिसँग गाँसिन्छ । काव्यदृष्टि कविता र त्यसको सिर्जनाका सम्बन्धमा कविको दृष्टिकोण हो । कवितामा पाइने विचार कविको विचारधारात्मक पक्षधरताबाट निर्माण हुन्छ । भूपिका कविताले कलाका सर्तभित्र रहेर विचारको प्रक्षेपण गरेका छन् । विचारका कारण उनका कविता कमजोर छन् भन्नेहरू पनि छन् तर विचारका कारण उनका कविता कमजोर छैनन् । विचार कवितामा आवश्यक मानिन्छ तर त्यो जीवनका अनुभवसँग एकीकृत भएर, संवेदनासँग जोडिएर, आफ्नो समयसँग सार्थक संवाद गर्दै व्यक्त हुनुपर्दछ । भूपिका कवितामा विचार यसैगरी आएको पाइन्छ । उनका कविताको प्रभाव समकालीन नेपाली कविमा पनि परेको छ । उनले निर्माण गरेको काव्यमार्गलाई आजका कैयौँ कविले पनि पछ्याइरहेका छन् । समकालीन नेपाली कविता मूलतः रिमाल र भूपिद्वारा निर्मित काव्यमार्गमा नै हिँडिरहेछ । सरलता, सुबोधता, व्यङ्ग्य, आलोचना र गम्भीर सामाजिक सरोकार समकालीन नेपाली कविताका महत्वपूर्ण विशेषता हुन् । समग्रमा भन्दा भूपि कवितामा प्रगतिशील स्वरलाई उच्च कलात्मक अभिव्यक्ति दिने आधुनिक नेपाली कविताको दोस्रो चरणका विशिष्ट प्रतिभा हुन् ।
भूपिका कमजोरीहरू पनि छन् । आफू हिँड्दै गरेको बाटोलाई बदलेर अर्काे बाटो समात्नु उनको कमजोरी थियो । आफ्नो समयलाई जसले जति बढी प्रभावित गर्छ, बाटो बदल्दा त्यसले त्यत्तिकै बढी जोखिम पनि उठाउनुपर्छ । भूपिले जोखिम उठाएका थिए । यही जोखिम उनको आलोचनाको मुख्य कारण थियो । भूपिले यस अवधिमा राजाको प्रशस्तिमा पनि केही कविता लेखेका छन् । उनले यस समयमा लेखेका केही कवितामा समकालीन यथार्थप्रति आलोचनात्मक चेतना पाइए पनि उनले गरेको पञ्चायतको समर्थनका कारण उनका यस्ता कविताले पनि खासै महत्व पाएनन् । अलग बाटोमा हिँडेपछि भूपिसँग रहेको पहिलेको तीक्ष्ण काव्य संवेदना नै रहेन । जीवनको पुछारतिर उनलाई आफ्नो कमजोरीको महसुस पनि हुन थालेको थियो, तर यतिन्जेल धेरै अबेर भइसकेको थियो । उनी बाँचेको भए सायद आफूलाई सच्याउँदा हुन्, गल्ती स्वीकार गर्दा हुन् तर अब यस्तो भनाइको कुनै अर्थ छैन । भूपिले गल्ती गरेका थिए र यसको चर्चा पछिसम्म पनि भइरहनेछ तर यसको आधारमा उनको समग्र काव्यिक योगदानलाई नै ओझेलमा पार्ने काम गर्न हुन्न । उनका कमजोरीको आलोचना गर्दै उनलाई यथोचित सम्मान प्रदान गर्न कन्जुस्याइँ गर्नु हुन्न । उनको योगदानको अवमूल्यन गर्नु आधुनिक नेपाली कविताको जीवनपक्षीय धारालाई नै अवमूल्यन गर्नु र कमजोर बनाउनु हुन्छ । केही कमजोरीका अतिरिक्त उनको लेखनको ठूलो हिंस्सा समाजप्रति जिम्मेवार एक कविको लेखन हो । भूपिलाई सबल र दुर्बल पक्षहरूको योगमै हेर्नुपर्छ र दुर्बल पक्षको नाममा उनका सबल पक्षलाई पनि पाखा लगाउने प्रवृत्तिबाट बच्नुपर्छ । भूपि आधुनिक नेपाली कविताका महत्वपूर्ण प्रतिभा हुन् ।